Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.4 kukwana
Hazvina mhosva kuti iwe mukuru sei data yako, zvichida hauna ruzivo rwaunoda.
Nyaya dzakawanda huru dzekushandisa dzisina kukwana , mupfungwa yokuti havana ruzivo rwaunoda kuongorora kwako. Ichi chinhu chinowanzoonekwa che data yakasikwa kune zvinangwa kunze kwekutsvakurudza. Mazhinji masayendisiti masuzhinji ave atova neruzivo rwekutarisana nokusakwana, zvakadai sekuongororwa kwakave kusina kubvunza mubvunzo waidiwa. Zvinosuruvarisa, zvinetso zvekusakwana zvese zvinowanzove zvakanyanyisa mukudarika kukuru. Muhupenyu hwangu, dambudziko guru rinowanzove risina hutatu ruzivo rwakakosha mukutsvakurudza kwevanhu: huwandu hwemashoko pamusoro pevatori vechikamu, maitiro kune mamwe mapuratifomu, uye deta kushandisa zvivakwa zvinongororwa.
Pakati pemhando nhatu dzisina kukwana, dambudziko rekudzidzira kusina kukwana kushandisa zvigadziriswa zvinyorwa ndezvakaoma kukugadzirisa. Uye pane zvakaitika kwandiri, kazhinji kazhinji kacho hazvikanganwiki. Zvichida, zvinyorwa zvinodaro ndezvisinganzwisisiki zvinoshandiswa nesayenzi masayendisiti nekudzidza uye kushandiswa kwezvinyorwa zvinorehwa zvinoreva nzira imwe yekutora iyo ichinyorwa ne data inowanikwa. Zvinosuruvarisa, izvi zvinoratidzika-zvinonzwika zvinowanzoitika kuva zvakaoma. Semuenzaniso, ngatitii tichiedza kuedza kuedza kuedza kutora mhinduro inoratidzika nyore kuti vanhu vanonyanya kuchenjera vanowana mari yakawanda. Kuti uedze chirevo ichi, iwe unoda kuyera "njere." Asi chii chinonzi intelligence? Gardner (2011) akakavimbisa kuti pane zvisikwa zvisere zvakasiyana siyana zveuchenjeri. Uye pane maitiro anokwanisa kunyatsorongedza chero ipi yeiyo mazano euchenjeri? Pasinei nebasa rakawanda rebasa nevanodzidza nezvepfungwa, mibvunzo iyi haisati iine mhinduro dzisinganzwisisiki.
Nokudaro, kunyange chirevo chisinganzwisisiki-vanhu vanonyanya kuchenjera vanowana mari yakawanda-vanogona kuva zvakaoma kuongororesa zvinyorwa nokuti zvinogona kuva zvakaoma kuti vashandise zvinyorwa zvinyorwa mumatare. Mamwe mimwe mienzaniso yezvinyorwa zvinorehwa izvo zvinokosha asi zvakaoma kushanda zvinosanganisira "maitiro," "social capital" uye "democracy." Masayendisiti ezvesuzhinji anoshevedza mutsara pakati pezvinyorwa zvinodhindwa uye dheta rakagadziriswa (Cronbach and Meehl 1955) . Sezvo iri pfupi pfupi yezvivakwa zvinoratidzira, kuvaka chivimbiso chinetso chinoshandiswa nevasayendisiti mune zvemagariro kwenguva refu. Asi pane zvakaitika kwandiri, zvinetso zvekuvaka kuvimbiswa zvakanyanya kana zvishanda nedata risina kugadzirwa nekuda kwekutsvakurudza (Lazer 2015) .
Paunenge uchiongorora tsvakurudzo yekutsvakurudza, imwe nzira inokurumidza uye inobatsira yekuongorora kugadzirisa kuvaka ndiyo kutora chigumisiro, icho chinowanzoburitswa maererano neshoko rekuvaka, nekudzorera zvakare maererano nemashoko akashandiswa. Somuenzaniso, funga zvidzidzo zviviri zvinofungidzira zvinoratidza kuti vanhu vanonyanya kuchenjera vanowana mari yakawanda. Muchidzidzo chekutanga, muongorori akawana kuti vanhu vanoronga zvakanaka paRaven Progressive Matrices Test-chidzidzo chakaongororwa cheongororo yekuongorora (Carpenter, Just, and Shell 1990) -kuve nepamusoro pezvinyorwa zvinowanikwa pamitero yavo yekudzokera. Muchidzidzo chechipiri, muongorori akawana kuti vanhu pa Twitter vakashandisa mazwi akareba vanowanzoreva mazita ekudhura. Muzviitiko zvose izvi, vatsvakurudzi vanogona kutaura kuti vakaratidza kuti vanhu vanonyanya kuchenjera vanowana mari yakawanda. Zvisinei, mukutanga kokutanga mazano ekugadzirisa zvakanaka anonyatsogadzirwa ne data, asi muchipiri haasi. Uyezve, sezvinoratidzwa muenzaniso uyu, deta yakawanda haisi kugadzirisa matambudziko nekugadzira kuvimbika. Iwe unofanirwa kusava nemigumisiro yekudzidza kwechipiri kana yakabatanidzwa mamiriyoni tweets, mabhiriyoni tweets, kana tweets katatu. Kune vatsvakurudzi vasiri kuziva chirevo chekuvaka kuvimbika, tafura 2.2 inopa mimwe mienzaniso yezvidzidzo zvakave zvakashanda zvakagadziriswa zvinyorwa zvinoshandiswa nekushandisa deta rekutsvaga deta.
Dhiyabhorosi 2.2: Mienzaniso yeMitambo yeDhamasiko Yakashandiswa Kushanda Pfungwa Dzakadzika
Imeyili mabhuku kubva kuunivhesiti (meta-data chete) Ukama hwehukama Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
Mitambo yezvemagariro evanhu paIibo Civic engagement Zhang (2016)
Imeyili mabhuku kubva kune imwechete (meta-data uye mashoko akazara) Tsika dzakagadzikana musangano Srivastava et al. (2017)
Kunyange zvazvo dambudziko rekusaziva kwekuwana zvakakosha kugadzirisa mazano zvakanyanya kuoma kugadzirisa, kune mikana yakakosha kune dzimwe mhando dzese dzisina kukwana: ruzivo rusina kukwana rwevanhu uye ruzivo rusina kukwana pamusoro pemafambiro pane mamwe mapuratifomu. Mhinduro yekutanga ndeyekutora zvese zvaunoda; Ini ndichakuudza pamusoro pazvo muchitsauko 3 apo ini ndikuudza pamusoro peongororo. The chikuru mhinduro wechipiri kuita chii umboo masayendisiti vanodana mushandisi-chizenga inference uye masayendisiti magariro vanodana imputation. Mune nzira iyi, vatsvakurudzi vanoshandisa ruzivo rwavo kune vamwe vanhu kuti vave nehumwe humwe hwevanhu. Chimwe chechitatu chinogona kugadziriswa ndechokubatanidza zvinhu zvakasiyana siyana zvemashoko. Iyi nzira dzimwe nguva inonzi kurekodha rekodhi . Chirevo chandinoda zvikuru chekuita izvi chakanyorwa Dunn (1946) mundima yekutanga yepapepa yekutanga yakanyorwa yakanyora pakunyoresa:
"Munhu mumwe nomumwe munyika anosika Bhuku reHupenyu. Iri Bhuku rinotanga nekuberekwa uye rinoguma nerufu. Mapeji aro akaumbwa nezvinyorwa zvezviitiko zvikuru muupenyu. Nhoroondo yekubatanidza ndiro zita rakapiwa kugadziriswa kwekubatanidza mapeji ebhuku rino mumubhuku. "
Apo Dunn akanyora ndima iyo aifunga kuti Bhuku reUpenyu rinogona kusanganisira zviitiko zvipenyu zvakadai sekuberekwa, kuroorana, kurambana, uye rufu. Zvisinei, iye zvino iyo ruzivo rwakanyanya pamusoro pevanhu rwakanyorwa, Bhuku reUpenyu rinogona kunge iri mufananidzo unoshamisa, kana mapeji akasiyana (kureva, matanho edu emagetsi) anogona kusungwa pamwechete. Iri Bhuku reHupenyu rinogona kuva rakakosha kune vatsvakurudzi. Asi, inogonawo kunzi database yekuparadza (Ohm 2010) , iyo inogona kushandiswa kune marudzi ose ezvinangwa zvisina kukodzera, sezvandicharondedzera muchitsauko 6 (Maitiro).